POEM LOVER: 2009
ပြလို့ နိန်ကတ်ဖို့ ဒေ..။
မိုးရိပ်ချေတိ ခိုကိုးရာမဲ့လားလို့ 
အချေသုံးယောက်ဝမ်းဆာနိန်ဖို့ ဗျာယ်လို့ 
ငါ-- ထွေးပွေ့ပိုင်ဆိုင်ခရ ။
မြတ်နိးစွာ ငါ စိုက်ပျိုးခရေ ။
ဒေချင့် အကြင်နာလတ်လား ဝေ
ရင်ထဲမှာ နင့်ခနဲ ခံစားလိုက်ရရေ ။
မတန်မရာ လားဝေ ။
အသိမဲ့ရေ ငါ့ ခြီးလှမ်းတိ နောက်ဆုတ်
ငါ ရောက်မှန်းမသိ ရောက်လား ရခရေ
အဝီး အဝီးဆုံးကိုလေ ။
ရနံ့ ချေကမွီးလို့ ကြိုင်
အချစ်တိနန့် စွတ်လို့ စို
နှလုံးသားမှာ မိန့် မရ
စိတ်ကူးတောင်ပံဖြန့် လို့ 
တတိတ်ချေ ဆိတ်ငြိမ်လို့ 
အနာဂတ်ကို တွိချင်ဇောနန့် 
ငါရို့ တိ အိမ်ပြန်လှကတ်ဖို့ ယေ…။
ဒီဂရီမနိမ့်ကျရေ အပျော်တိနန့် 
ရခိုင်ရို့ ကိုးကွယ်ရာ ရခိုင်စာ။
ရခိုင်ရို့ အားထားရာ ရခိုင်စာ။
ရခိုင်ရို့ အသိပညာ ရခိုင်စာ။
ရခိုင်ရို့ ခြီရာ ရခိုင်စာ။
ရခိုင်ရို့ ဆုပ်ကိုင်လားရာ ရခိုင်စာ။
ရခိုင်ရို့ ရှင်သန်ရာ ရခိုင်စာ။
မှတ်ချက်။ ။ရခိုင်သားရခိုင်သမတိက ရခိုင်စာကို မြတ်နိုးပနာ တန်ဖိုးထားလို့ရီးသားဖို့ မကြိုးစားကတ်ကေ တခြားဇာလူမျိုးကလေ့ လာပြီးကေ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မြှင့်တင် ရီးပီးဖို့ မဟုတ်ပါ။ ရခိုင်စာနန့် ရခိုင်ရို့ စာပီ ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ခိုင်မာလာအောင် လုပ်ရဖို့ ဆိုရေ အသိစိတ်နန့် ဝတ္တရားက ရခိုင်သားရခိုင်သမတိုင်း ယုံကြည်စွဲမှတ်ထမ်းဆောင်လားရဖို့မွီးရာပါတာဝန် ပင်ဖြစ်တေ။
ငါရို့ လိုက်မမှီရာ ဒေ ....။
တတောလုံး ပြောင်လား ယင့် .....။
ရခိုင်ပြည် ကမ္ဘာကျော်လားဖို့ ယေ....။
မရောက်စွာ ဟိမ့်သိမ့်လာဂု ......။
လက်ညောင်းလတ်မေ လို့ ဒေ..........။
စုတ်ပီ စုတ်ပ ရီမှာဆုံး
ဖပြုတ်ကေ ရာဇ၀င် တုံး .....။
ရက္ခတိုင်းကို ကယ်တင်ဖို့ လူတိ
ကမင်ညစ်ဖို့ ကျဖို့ ဒေ.....။
ပိတ်ဆို့ နှိပ်စက်ခြင်းတိနန့် 
နတ်ဆိုးတိကို ဂုဏ်ပြုပီးခရေ ဒီဇင်ဘာ
ကံကြမ္မာဆိုးကို အတိုးချထားခရေ ဒီဇင်ဘာ
အို... ဇာမှာ.......။ ။ ။
ငါ သူ့ကို မိန့်ပစ်ဖို့
ငါ သူ့ကို ရူးသွပ်ခမိလို့
သူ့ကို ငါ့ ရင်ထဲက
ဒေပိုင် တပိုင်းတစ စာသားတိအဖြစ်
ငါ့အတွက်, သူ အသိအမှတ်ပြုဖို့အတွက်
တစ်ဘ၀စာ ထာဝရ တူးဆွဆဲဆိုစွာကို
လောင်ကျွမ်း ပြာကျပါစီ.. .။
သတ်မှတ်ချက် အနီနန့်က တက်မက်မှုရာ...။
ရိုးရှင်းစွာ ဝန်ခံဘာရေ အရိပ်ချေ
ချိုင်ပနာ လွှတ်လိုက်ဗျာလ် ...။
တရားခံက ကံကြမ္မာရာလာဝေ ...။
ငါရို့ တိ ရွီးနိန်စွာ
ကိုယ့်သမိုင်းအမွီကို ကိုယ်ရို့ ထမ်းပနာလားဖို့ 
ကိုယ့်ပစ္စက္ခကို ကိုယ်ရို့ ဂုဏ်သိက္ခာနန့် တည်ဆောက်ဖို့ 
ကိုယ့်အနာဂတ်ကို ကိုယ်ရို့ ပိုင်ဆိုင်ဖို့ 
ကိုယ့်မြီ ကိုယ့်ရီနန့်ကိုယ့်ပြည်ရနံ့ ကို ရှုပနာ
ငါရို့ တိ ဇာလဲဆိုစွာကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ကြည့်ဖို့ …..၊
ကျွန်တော် အားရမိပါရေဆရာ ။
အာဂုံဆောင်ထား ရခိုင်သားရို့ ။ … ။
(မိုးကိုလင်း) ကဗျာကိုတင်ပီးလိုက်ပါရေ ။
ငါပြောစွာ အမှန် ၊ ငါကြံစွာ အဟုတ်
ငါလုပ်စွာ အကောင်း ၊ ငါပြောင်းစွာ အသစ်
ငါချစ်စွာ လူမျိုး ၊ ငါရိုးစွာ သစ္စာ
ငါရှာစွာ ပညာ ၊ ငါလာစွာ မင်းတွက်
ငါမက်စွာ ငွေကြီး ၊ ငါပီးစွာ ဓန
ငါရစွာ ဥစ္စာ ၊ ငါ့မာနစွာ ငါ့အသိ
ငါဟိ့စွာ ငါမျို ၊ ငါလိုစွာ ငါတောင်း
ငါ့ခေါင်း ငါပျင် ၊ ငါ့လင် ငါယူ
ငါ့အပူ ငါငြိမ်း ၊ ငါ့ယိမ်း ငါက
ငါ့အလှ ငါသ ၊ ငါ့ဘဝ ငါပြောင်း
ငါ့လောင်း ငါစီး ၊ ငါ့ချီး ငါမွှီး
ငါ့စီး ငါတား ၊ ငါ့သား ငါကယ်
ငါ့လယ် ငါထွန် ၊ ငါ့ဟန် ငါလိမ်
ငါ့အိမ် ငါဆောက် ၊ ငါလျှောက် ငါ့လမ်း
ငါ့စခန်း ငါချီ ၊ ငါ့လီ ငါထုတ်
ငါ့အလုပ် ငါရှာ ၊ ငါ့သိက္ခာ ငါဆယ်
ငါလူလည် ငါ့စကား ၊ ငါ့တရားနာယူ
ငါ့ပိုင်လူ ဇမ္ဗူမှာ မဟိ .. ။
ငါပင် “ရခိုင်” ဟုတ်ယင့်လား ။…။
(မိုးကိုလင်း) ကဗျာကို တင်ပီးလိုက်စွာပါ ။
စိတ်မညစ်ကေ့ သူငယ်ချင်း ။
စိတ်ဓါတ် မကျကေ့ အပေါင်းသင်း ။
ဂန္တဝင်မြောက် ၁၆ ယောက်၏
ကမ္ဗည်းထိုး မှတ်တမ်းတင်စွာ ....
ဒေဂု ၁ရ ယောက်မြောက်
မင်းနားလည်နိုင်ပါစီ ရောင်းရင်း ။
Labels: ပန်းဇင်း ဂေါင်းဗျောင်
နှင်းပန်း (Hnunn Pann)
သာယာကျုးရင့် ၊ အသျှင့်ပြည်ရွာ
ခြုံချချင်ချ ၊ ပိုက်တန်းချင်တန်း
ပြလိုက်ချင်ယင့် ။ ။
ပုထုစဉ်တိ ဒုက္ခက ....။
ပြဿနာ လာချင့် ....။
မှားလားလိမ့်မေ နန်း ...။
ဂျောင်ထိုးနီ ရရေ ....။
အောက်ကျ နောက်ကျ နန့်
ဘ၀ ဆုံးလီ ကတ်ရယင့်....။
မင်းရိုတိ ညီညွတ်ရေး ....။
အ၀ီးကြီးကို လှမ်းကြည့်မမြင်ပဲနန့် 
အပူမီးညွန့် တိတောက်ပလို့ ....။
“လမ်းသစ်ထွင်ဖို့ငါရို့ တိတာဝန်”
ငါရို့ တိ လားနိန်ကတ်ရရေ…။
ငါရို့ ချစ်တေ ရခိုင်ပြည်
မောင်လူမိုက်ကို ပါးဇီ (ပဇိ)ကိုက်ပြ
အဆံမပါ ကျီးအာသီးကာ …။
အမျိုးချစ်တေလူ လို့ ... ။”
အဖ ကို ငါ ကတိပီးလိုက်တေ..။
သက္ကာယဒိဋ္ဌိများ နှင့် “ငါရခိုင်”
ငါဟိစွာ ငါမျို ၊ ငါလိုစွာ ငါတောင်း
ငါပင် “ရခိုင်” ဟုတ်ယင့်လား... ။
အဘာသိရေ နန်း ....။
စိတ်မကူး ပါဂေ့ ဝေ ....။
စာ ကိုဖတ်ပါ ဝေ ...။
အင်္ဂလိပ်စာ သင်ပါ ဝေ .....။
အဖ နန့်ဘ၀ ကို
ရခိုင်ပိုင် ရွီးဖို.စွာ ရှက်ပါရေ
“ယခိုင်ပြည် သံတွဲက ပါ
အမိရခိုင် အဖ ရခိုင်” ပါ
မွန်းရေလူရို.၊ ငါ အဂွင့် မွန်းရေ...။
ကမ္ဘာရွာမှာ အခိုင်ဆုံးလို့ သုံးနှုန်းခစွာ
ပြည့်နီခစွာ ဇာလူယူလို့ ပျောက်လီခလဲ...။
ဒေါ်လာ ? ပဟေဠိ
ဒင်္ဂါးတိ စုတ်ပဲရေ အဘုချေ ။
ပုဇွန် နှင့် ရီခူ
အဘာလည်း မသိဝေ အဘုချေ ။
အစိမ်း အပြာ ၀တ်ထား
သတိထားဝေ .. အဘုချေ ။
ဒေချင့် လား ရခိုင်သား
ဇာပိုင် ခွီးလေ့ ......။
လူများ စာ၊လူများစကားကို ကျကေ
ကြွိ နိန်အောင် ပြောနိုင် ရွီးနိုင်ရေ
ဘဇောင် လူအိမ် ကောင်းတိလဲ....။
ပြုံးစိ၊ ပြုံးစိ နန်.
အဖ ပြည် လှည့်တောင်
ဟိဟိ...ဟားဟား ...ဟောက် ....။
တရွီ တဖင် တစင်းတင်…။
ရွှေ၊ ငွေ၊ ဖေသာ ရတနာတိကို
အပင်အကိုင်း ပျိုင်းကျလာဂေ ခုန်ထွက်ဖို့
အတိတ်နိမိတ် တဘောင် အာဂုံဆောင်လို့
၀င်စီးနိန်မှန်း ငါ့စိတ်က တန်းသိရေ
“ ရက္ခ ”ဆိုစွာ မသိ
လက်ခံဖူးခရေ ဝဋ်ကြွီးအလား ..။
၂၀၁၀ မှာ ပြောင်း
တနီရာ ငါအမတ်လောင်းအတွက် ..။
စဂိုးလောက်မှ ဇောက်မနက် ဝေး ။
လက်မ,က အတိတ်ဖက်ကိုရာ ထိုးလို့..
“ငါ” ဆိုစွာ “ငါ” မဟုတ်ဗျယ်လာ.....။
¸.•♥´¨`♥•.¸ •.¸¸.•. •.¸
ငါ့ မျှော်လင့်ချက် ….။
¸.•♥´¨`♥•.¸ •.¸¸.•. •.¸¸
ရောင်ခြည် ဖျော့ဖျော့တိ ကြားထဲ
တိုးဝင် ပုန်းအောင်း လားလီရေ…..။
(ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ပြိုလဲသူ အခင်ထွီးအတွက်)
ငါ့ နှလုံးသား သွီးတိ
ငါ့ တစ်ခန္ဓာ လုံးကို
လာလှီး နိန်ကတ်တေ ဂါ...။
အရည်ဖြစ်လိုက် ၊အခဲဖြစ်လိုက်နန့်… ။
Those Who Should Be Executed
ဒေါ်လာလိုချင်။ လောဘ၀င်လို့ 
မြင်မြင်သမျှ။ တွီ့ သမျှအောက်သား
သာကီနွယ်ဖွား။ ရခိုင်သား တော်လှန်ရီးသမားအတုတစု။
ငါမူအနီ။ အောက်သားညှီနံ့ 
ဒီမိုကရေစီအရီး။ ဒို့ အရီးမှာ
ဖေါက်ပြန်ခြင်းရေ။ လက်ငင်းသီးဒါဏ် ထိုက်နီဗျာယ်။
၁၁၄၆ ဥသြရီသောက် မုနိပျောက်
ယင်းမှာ ထောင်ချထား --။
ရက်က ကဠုံပါ --။
ဤသို့ မှတ်လို့သိ --။
သံယောဇိုင်နန့် ချိုင်ထားလို့ မရလိုက်ဗျာလ်….။